U-Osuna: Umdlalo weZihlalo zeFilimu Indawo
Yurophu Speyin Sevilla
Osuna, iSpain kunye neMidlalo yeZihlalo zobukhosi
Idolophu yaseAndalusi yaseOsuna ibetha iintloko xa kwaziswa ukuba iindawo zonyaka we-5 ze-HBO series series zeTrone ziza kudutshulwa kwisixeko. U-Osuna luhambo oluhambelana nosuku oluvela e-Seville kwaye lukhulu lwezinto eziza kulungelelanisa ngqo kwilizwe eliyingqungquthela laseWesteros (ne-Essos?).
U-Osuna usezantsi kweSpeyin, phakathi kweSeville neGranada, ekude ne-Antequera. Kukwase - Seville ukuya kumzila wezitimela eMalaga .
Yiya kuTyelelo oluKhokelekileyo lweMidlalo yeeTrone zoLimo lweeFilimu e-Seville nase-Osuna
Kukho ukutyelela onokuyithatha oku kukubonisa indawo ezinqabileyo eSpeyin ezibonakala kwiMidlalo yeTrone. Jonga i-Alcazar yaseSeville, ibonakalisa kakhulu kwiindawo zeDoran Martell kwi-HBO show kunye nokwandisa okwenziwe kwisixeko sase-Osuna.
U-Osuna akufanele adideke kunye neClub Atletico Osasuna, iqela lebhola elalisePamplona, ​​enyakatho yelizwe.
Indlela yokuzuza i-Osuna kwi-Andalusia yakho uhambo
U-Osuna luhambo lwesuku oluvela eSevville, eGranada naseMalaga, mhlawumbi kwimizuzu engamaqingatha ukuba uthanda ukukhawuleza ukukhangela kwiindawo ezidumileyo kwaye uthi uthe wahamba apho iindlu ezinkulu zeWesteros zihamba khona.
Ukuba uhamba ngemoto, kuya kuba lula ukungena e-Osuna endleleni esuka eSeville ukuya eGranada okanye eMalaga. Kungcono, udibanise nohambo oluya kwi- Antequera (mhlawumbi kwindlela phakathi kweedolophu okanye uhambo oluphindwe kabini).
I-Antequera's dolmens kunye neLandi loLwaba liyabonakala ngokugqithiseleyo ngemoto.
Ukuba uhamba ngesitimela, qaphela ukuba ungekho ndawo ukushiya imithwalo yakho kwisikhululo se-Osuna.
Iindawo ze-Osuna kwiMidlalo yeziTrone
Iindawo ze-Osuna ezinokusetyenziswa okanye ezisetyenziselwa ukumela i-Sunspear kwiMidlalo yeziTrone:
IYunivesithi yase-Osuna Isakhiwo senkulungwane yeshumi elinesithandathu, iyunivesithi ekhawulezileyo isetyenziswe kwakhona. Kwakukho ixesha apho iyunivesithi yayihloniphekile njengeyunivesiti eSalamanca.
La Colegiata de Osuna Icawa yeshumi elinesibhozo elinesibini kwilayunivesithi
I-Canteras yase-Osuna 'Iinqanawa ze-Osuna' apho ininzi yelitye eyakhiwa loo mzi yachongwa.
Ngomshicilelo, ubuncinane umboniso omnye kwi-Essos wafotshwa e-Osuna: inkunzi enqabileyo e-Osuna yayingumgodla omkhulu waseDaznak.
Ezinye izinto e-Osuna
Ezinye izinto e-Osuna, akunakwenzeka ukuba zibekwe kwiMidlalo yeziTrone, zibandakanya:
UCalle San Pedro Isitalato esihle sezindlu ezihlambulukileyo ezimhlophe kunye nezakhiwo zembali. Ininzi yale sitrato yinto yanamhlanje ukuba ibonise kwiMidlalo yeziTrone.
Ihotele iPalacio Marques de la Gomera Ihotele yekhulu le-18 elinomfanekiso we-baroque. Unako ukuhlala kule hotele, kwaye amaxabiso awabi kakhulu (jonga ngezantsi).
I-Monastery ye-Encarnacion Isasetyenziswa , (inokutyelelwa kuphela nun njengesikhokelo-esondeza) ngoko mhlawumbi ingafanelekanga izigcawu zokuqhafaza ezingaqinisekanga zibandakanya ubunqunu obukhulu.
I-Torre del Agua / iMyuziyamu ye-Archeology Abantu baseWesteros abanasidingo sokongamela imyuziyam kwaye isakhiwo mhlawumbi sikhulile ukuba singene kwi-Sunspear (nangona ingasetyenziswa kwenye indawo).
Indlela yokufikelela kwi-Osuna
I-Osuna ixhunyaniswe ngokuqeqesha kwaye ikulungele ukuhamba ngeentsuku kunye nokuyeka ngokukhawuleza endleleni eya kwenye indawo.
Ukusuka eSeville, eMalaga naseGranada ngeTeyeshini
U-Osuna usemizila emibini yokuqeqesha: ukusuka eSeville ukuya eGranada ukusuka eSeville ukuya eMalaga. Kukho izitimela kwiiyure okanye ezimbini ukusuka eSvilla Santa Justa (kunye nokudlulela eSevilla San Bernardo) nakwiiteshini zaseGranada. Uhambo luhamba ngaphantsi kweyure ukusuka eSeville kunye neyure-nesiqingatha ukusuka eGhanada. Kulo mgca wokuqeqesha u-Antequera no-Almeria.
I-Linesur, inkampani yebhasi eyayisetyenziselwa ukuqhuba i-Seville ukuya kwindlela ye-Osuna, ibonakala iphume kwishishini. Ezinye iiwebhsayithi ezibango kukho ibhasi phakathi kwezixeko zibini zibonakala zingekho kumhla.
Ikhampani enye yebhasi eneenkonzo ze-ALSA , kodwa yenza konke okusemandleni ukufihla loo nto. Iwebhusayithi ye-ALSA ayibhalisi inkonzo, kodwa ukukhangela iSeville kwiNkonzo ye-Antequera ibonisa ukuba ezinye iibhasi kule ndlela ziyeke kwi-Antequera.
Kuhlala e Osuna
Akukho ndawo yokuhlala kwi-Osuna, kodwa ingaba yinto enhle kakhulu. Ihotele iPalacio Marques de la Gomera yenye yezakhiwo ezindala kunazo zonke ze-Osuna. Ukuhlala apha kukuxabisa kakhulu imali.
Ukuze ube nolwazi oluthe xaxa, khangela i- Turismo Rural de Osuna , enezindlu zezindlu zasekhaya ngaphandle kweedolophu.
Umcebisi Iingcebiso zoBullfighting eSeville, eSpain
Endleleni: Ukusuka eSeville ukuya kuFaro
I-Seville ukuya eCordoba ngeTear, iBhasi, iCar neenqwelo
Indlela yokufumana ukusuka eSeville ukuya eGibraltar
Izinto Ezozenzayo eBarrio Santa Cruz eSeville
Umxholo oyiNtloko weFrench waseFransi
Iindawo Zentsapho Zonwaba eTexas
Imephu yeNtaba yeVernon Estate kunye nezikhokelo
Iindawo ezigqibeleleyo ze-10 ze-Capitol Hill - iWashington, DC
Ipropati Yomphakathi yaseNatomas
Umoya oManyeneyo uqwalasela iMimiselo yokuThumela abaPhambuli emva kokuPhukisa kwesiganeko
I-Scariest Ghost Tours e Seattle
Iifenitshala zaseBrooklyn Zenza I-Flair
Iingcebiso zokuhamba, iMicimbi kunye neMimoya e-Amsterdam ngo-Agasti
I-Chicago Gay Nightlife Guide: I-Lakeview & Boystown
Indawo yokudlela yaseLe Grand Colbert: Inkqantosi e-1900s eParis
Ukubhiyozela uSuku loBugcini lwabaNgcwele kwi-Irish Way ngoFebruwari 1
KwiTekel Island Travel
Izinto ezonwabileyo zokwenza kwiSanibel neCaptiva Islands kunye nezingane